तुलसीको पात दूधमा उमालेर पिउँदा हुन्छन यति धेरै फाइदा ,जान्नुहोस् ! कस्ता कस्ता रोगका लागि हुन्छ उपयोगी–Samacharpati
एनआरएनए हेल्थ सम्मेलनको निस्कर्ष : चेतनाको अभावमा महिलामा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै
आजको राशिफल : २०७७ साल असोज ४ गते आइतबार
मिस्ट्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको साधारण शेयर निष्कासन
नेलम्वो नेपालद्वारा पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान
घरमै बसेर पोखरा हङकङ बजारबाट सामान अर्डर गर्न सकिने, महानगर भर होम डेलिभरीको सुबिधा
आजको राशिफल : २०७७ साल असोज १ गते
पोखरामा सोमबार बिहानै ३१ जना कोरोना संक्रमित थपिए (कहाँ कहाँ थपिए हेर्नुहोस)
आजको राशिफल : २०७७ साल असोज २ गते
पाेखरामा थपिए २ जना काेराेना संक्रमित
आजको राशिफल : २०७७ साल असोज ३ गते
तुलसीको पात दूधमा उमालेर पिउँदा हुन्छन यति धेरै फाइदा ,जान्नुहोस् ! कस्ता कस्ता रोगका लागि हुन्छ उपयोगी
काठमाडौँ, ४ भदौ । तुलसी बहुगुणी वनस्पती हो । त्यही कारण हाम्रा पूर्खाहरुले यसलाई उच्च महत्व दिँदै आए र संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै आए । धेरैजसोले तुलसीको औषधीय गुणलाई बुझेर नै घर अघिल्तिर आँगनमा तुलसी रोप्दै आए ।
तुलसीको पात निकै उपयोगी हुन्छ । सामान्य ज्वारो, रुघा आदिबाट बच्न मात्र होइन, यसको नियमित सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउन सकिन्छ । साथै तुलसीले वायु शुद्धीकरण गर्ने काम पनि गर्छ ।
अब कुरा गरौं दूधको । दूध पनि बहुगुणी पेय हो । यो जति स्वादिलो हुन्छ, उत्तिनै गुणकारी पनि । यसमा क्याल्सियम लगायत पोषक तत्व पाइन्छ । अब दूध र तुलसीलाई एकै ठाउँ मिश्रण गरिए के होला ?
कतिपय पदार्थ यस्ता हुन्छन्, जो आफैमा औषधि हुन्छ । तर, त्यसलाई अर्को पदार्थसँग मिश्रण गर्दा त्यो हानिकारक हुनसक्छ । विषाक्त हुनसक्छ । ठीक त्यसैगरी कतिपय पदार्थलाई आपसमा मिलाउँदा भने त्यसको औषधीय गुण अरु बढ्छ । जस्तो दूध र तुलसी ।
तुलसीको पातमा अनेक किसिमका औषधीय गुण हुन्छन् । यदि नियमित रुपले तुलसीको पात दूधमा उमालेर पिउने हो भने धेरै किसिमको रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
त्यसो त अहिले धेरैजसो मान्छे कुनै न कुनै रोगले सताइएका छन् । कोही मधुमेहले ग्रस्त छन् त कोही हृदय रोगले । यसैगरी कोही क्यान्सरले ग्रस्त छन् । यीमध्ये धेरैजसो रोग हाम्रो खराब खानपान र जीवनशैलीले निम्त्याएको हो । अतः सही खानपान, सन्तुलित दिनचर्या अपनाउने हो भने हामी सम्भावित रोगबाट बच्न सक्छौं । यस्ता सम्भावित रोगबाट बच्नका लागि तुलसीको पात निकै उपयोगी हुन्छ ।
दम रोगमा फाइदा
यदि तपाईं श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने दूधमा तुलसीको पात उमालेर पिउनु लाभदायक हुन्छ । नियमित रुपमा तुलसीको पात दूधमा उमालेर सेवन गर्दा दम रोगमा फाइदा गर्छ ।
दूधमा तुलसीको पात उमालेर पिउँदा टाउको दुखाई वा माइग्रेन जस्ता समस्याबाट पनि राहत मिल्छ । नियमित रुपले यस औषधि सेवन गर्दा समस्याको जड नै ठीक हुनसक्छ ।
तनाव वा डिप्रेसनमा
यदि तपाईंमा तनाव वा डिप्रेसनको समस्या छ भने पनि दूधमा तुलसीको पत्ता उमालेर सेवन गर्न सक्नुहुन्छ, जो निकै लाभदायक हुन्छ । तनाव एवं चिन्ता कम हुन्छ । डिप्रेसन रोगीका लागि पनि यो लाभदायक हुन्छ ।
दूधमा तुलसीको पात उमालेर नियमित सेवन गर्दा हृदय रोगीलाई निकै फाइदा गर्छ । त्यतिमात्र होइन, यसले मुटुलाई स्वस्थ राख्न पनि सहयोग गर्छ ।
यदि कुनै व्यक्तिलाई पत्थरीको समस्या छ भने दूधमा तुलसीको पात उमालेर खाली पेटमापिउनुपर्छ । यसो गर्नाले मिर्गौलाबाट पत्थरी हट्छ ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
तुलसीको पातमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पाइन्छ, जो हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । यतिमात्र होइन, यसमा क्यान्सर पैदा गर्ने कोशिकासँग लड्ने क्षमता पनि हुन्छ । यसका साथै तुलसीको पातमा एन्टिब्याक्टेरियल एवं एन्टिभाइरल गुण हुन्छ ।
कसरी सेवन गर्ने ?
यसलाई औषधी बनाउनका लागि तपाईंले डेढ गिलास दूध उमाल्नुपर्छ । जब दूध उम्लन सुरु गर्छ त्यसमा ८ देखि १० वटा तुलसीको पात राख्नुपर्छ । अब एक गिलास दूध भएपछि त्यसलाई सेलाउन दिनुपर्छ । मन तातो भएपछि पिउन सकिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा थपिए ५१ जना नयाँ कोरोना संक्रमित
तीन दिनसम्म चल्ने भर्चुअल सम्मेलनको प्रधानमन्त्रीओलीले उद्घाटन गर्ने
आज देशभर १५ सय ३९ जनामा देखियाे कोरोना संक्रमण
आज नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ८ जनाको मृत्यु
आज नेपालमा कोरोनाबाट ११ जनाको मृत्यु
कुलमान घिसिङको समर्थन तथा संविधान दिवसको विरोधमा साँझ ७ बजे ५ मिनेट बत्ति बन्द गर्न अपिल
गणेशमान सिंहको जीवनबाट नेपालका राजनीतिक नेताहरुले पाठ सिक्नुपर्ने:प्रकाशमान सिंह
कमल थापाले गरे जिल्ला अध्यक्षहरुसँग भर्चुअल बैठक
आजबाट बस सञ्चालनमा
प्रधानन्यायाधीश सिंहको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै आज सबै अदालतमा बिदा
उमेशको समाजसेवा : गर्भवतीलाई स्कुटरमा राखेर कुदाए, सुकुम्बासीलाई लकडाउनकै बेला जग्गा पास गर्दिए
गण्डकी प्रदेशमा थपिए ४४ जना नयाँ काेराेना संक्रमित
कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि करापुटारमा त्रास, घरघरमा पुगेर पिसिआर परिक्षण गरिने
स्याङजाको पुतलीबजारमा २२ जना कोरोना संक्रमित थपिए (कुन वडामा कति थपिए हेर्नुहोस)
करापुटारबाट १० गते पोखरा आएका थिए संक्रमित (कहाँ कहाँ पुगेका थिए उनि)
पोखरामा आज बिहानै थपिए २० जना कोरोना संक्रमित (हेर्नुहोस कुन वडामा कति थपिए)
आज पाचौँ संविधान दिवस मनाइँदै, प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै
गण्डकी प्रदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या ३२ पुगे, फेरी १५ जना थपिए संक्रमित
म्याग्दीमा स्क्रब टाइफस र डेंगुको सङ्क्रमण फैलँदै
लकडाउनको १ सय १४ दिन
एडिबीको सहुलियत ऋण सहयोगमा भीमदत्तमा तीन अर्बका योजना
सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सरकारलेआफ्नै मार्गदर्शन तयार
कुन तत्व कति ? पाइन्छ, काजुमा जान्नुहाेस् ! नियमित काजुकाे प्रयाेग गर्दा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाकाे बारेमा !